OEM Noocyada Xirxiraya Kiniiniyada Vitamin B ee Isku-dhafan
[Faahfaahin:] 300mg ~ 1000mg
[Waxqabadka:] Caafimaadka dheefshiidka iyo neerfaha
Kordhinta tamarta iyo istaandarka, waxay gacan ka geysaneysaa ilaalinta wareegga caafimaadka, dheef-shiidka, difaaca jirka, iyo nidaamka dareenka.
Yaraanta ayaa sababi karta beriberi. Calaamadaha cudurkan neerfaha ayaa waxaa ka mid ah miisaanka oo yaraada, khalkhalka niyadda, Cudurka maskaxda ee Wernicke (aragtida dareenka oo daciifa), daciifnimo iyo xanuun ku dhaca xubnaha, arrhythmia iyo barar (unugyada jirka oo barara). Wadnaha oo istaaga iyo geeri ayaa dhici karta mararka qaarkood. Yaraanta 'thiamine' oo yaraata ayaa keenta cudurka 'Korsakoff syndrome', oo ah waallida aan laga soo noqosho lahayn oo lagu garto amnesia iyo male-awaal magdhaw ah.
Maqaalka ugu muhiimsan: Riboflavin § yaraanta
Yaraanshaha ayaa sababi kara ariboflavinosis. Calaamadaha waxaa ka mid noqon kara chematosis (bushimaha dildilaaca), xasaasiyad sare oo qorraxda, keratitis, glossitis (carrab barar), seborrheic dermatitis ama pseudosyphilis (gaar ahaan saameynta xuubka weyn ama faruuryaha waaweyn iyo afka), Pharyngitis (cunaha oo xanuuna)), ciriiri iyo barar xiiqda iyo xuubka afka.
Yaraanta iyo tryptophan waxay sababi karaan cudurka 'pellagra'. Calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah gardarro, dermatitis, hurdo la’aan, daciifnimo, waalli iyo shuban. Xaaladaha horumarsan, pellagra wuxuu sababi karaa waallida iyo dhimasho (3 (+1) D: dermatitis, shuban, waallida iyo dhimashada).
Yaraanshaha ayaa sababi kara finanka iyo paresthesias, in kastoo taasi aysan aheyn wax caadi ah.
Maqaalka ugu muhiimsan: Vitamin B6§ yaraanta
Seborrheic dermatitis-like dillaaca, cudurka indhaha ee guduudan, calaamadaha neerfaha (tusaale suuxdin)